ioGates သည်ဒိန်းမတ်အသံလွှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်နှစ်ရှည်မိတ်ဖက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဒိနျးမတျအသံလွှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အတူ ioGates လက္ခဏာတွေ Long-Term မိတ်ဖက်သဘောတူညီချက်
ဒိနျးမတျအသံလွှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အတူ ioGates လက္ခဏာတွေ Long-Term မိတ်ဖက်သဘောတူညီချက်
Easy-To-အသုံးပြုမှု Professional က-အဆင့်တိမ်တိုက်-အခြေခံပြီးဗီဒီယို-မျှဝေခြင်းပလက်ဖောင်းနှင့်အတူအမျိုးသားထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ ioGates
ကိုပင်ဟေဂင်, ဒိန်းမတ် - သြဂုတ်လ 27, 2014 - ioGates, ခွဲဝေမှုအဘို့မိုဃ်းတိမ်ကို-based tools တွေကိုတစ်ဦးပံ့ပိုးပေးသူ, converting နှင့်ရိုးရှင်းသော-to-အသုံးပြုမှုကိုက Web Interface ကိုအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မီဒီယာဖိုင်များကိုဖြန့်ဝေ, ဒိနျးမတျနဲ့သုံးနှစ်မိတ်ဖက်သဘောတူညီမှုလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး အသံလွှင့်ကော်ပိုရေးရှင်း (DR) ။ သဘောတူညီချက်အရ, ioGates အလွယ်တကူ၎င်း၏အမျိုးမျိုးသောဌာနဆိုင်ရာနဲ့ content မိတ်ဖက်အကြားတွင်အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်အကြောင်းအရာမျှဝေခြင်းနှင့်လဲလှယ်မှုအတွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် ioGates-powered ပေါ်တယ်နှင့်အတူ DR ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာဖြေရှင်းချက်အသုံးပြုသူအစိတ်အပိုင်းအပေါ်အဘယ်သူမျှမအဆင့်မြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသိပညာလိုအပ်သည်။ ioGates ထိုကဲ့သို့သော TV3 အားကစား, တီဗီ2ဒိန်းမတ်, SBS ရဲ့ Discovery နှင့် Nordisk ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အတိုကောက်အဖြစ်ထုတ်လွှင့်ဖို့ဆင်တူ hosting ဖြေရှင်းချက်ဖြန့်ဖြူး။
"ကျနော်တို့ကတတ်နိုင်သမျှအသစ်က system ကိုအသုံးပြုလုပ်ကိုင်လေ့ကျင့်ရေးဝန်ထမ်းအပေါ်အချိန်နှင့်အရင်းအမြစ်များအများကြီးဖြုန်းခြင်းမရှိဘဲနှစ်ဦးစလုံးပြည်တွင်းနှင့်ပြင်ပမှအသံနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်များမျှဝေဖို့လုပ်လိမ့်မယ်လို့တစ်ယူနီဖောင်း, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြေရှင်းချက်ငျြတယျ," Gert Hansen, အဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တဦးကပြောပါတယ် ဒိန်းမတ်အသံလွှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းမှာမီဒီယာစနစ်များ, နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေး, အဘို့။ "Outsourcing ဒိနျးမတျအသံလွှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့မဟာဗျူဟာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်, ကျနော်တို့ ioGates လည်းအလွန်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေသောယုံကြည်စိတ်ချရသောမိုဃ်းတိမ်ကိုဖြေရှင်းချက်ထောက်ပံ့နိုင်ကြောင်းမကြာသေးခင်ကအတွေ့အကြုံကနေသိသည်။ ကျွန်တော်အဖြေကို ရွေးချယ်. တဲ့အခါမှာအသုံးပြုမှုလွယ်ကူအရေးပါသော parameter သည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ "
အဆိုပါပူးပေါင်း ioGates ကနည်းပညာပိုင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ 2014 ပါဝင်နိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုတစ်လျှောက်လုံးကြီးမားပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့မီဒီယာဖိုင်များကိုဖလှယ်ဘို့ပြုလုပ်စီရင်ဗွီဒီယိုတစ်ခု-hosting ဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ DR ထောက်ပံ့ထားတဲ့အတွက်မကြာသေးမီကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Eurovision သီချင်းပြိုင်ပွဲ 37 စဉ်အတွင်းအောင်မြင်သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ဒေါက်ပေါ်ကြွလာ ။
အဆိုပါ ioGates ပေါ်တယ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအိုင်တီထောက်ခံမှုဘို့လိုအပ်ကြောင်းမပါဘဲလူတိုင်းကအသုံးပြုနိုင်ကာအလိုလိုသိဖြေရှင်းချက်များအတွက် DR ရဲ့လိုအပ်ချက်ကျေနပ်။ DR သုံးစွဲသူများ upload convert, ဝေစုများနှင့်မည်သည့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကို format နဲ့ content တွေကိုဖြန့်ဝေပါကဖြစ်နိုင်ခြေအမျိုးမျိုး DR ဌာနများနှင့်အစီအစဉ်ကိုထုတ်လုပ်သူများ, ပေးပို့လက်ခံရရှိ, အလျင်အမြန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယိုဖိုင်များကိုအတည်ပြုရန်အဘို့အအောင်နိုငျသညျ။ ကင်မရာအော်ပရေတာကိုအလွယ်တကူအယ်ဒီတာအဖွဲ့န်ထမ်းရန်ကလစ်များပြန်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်စဉ်ဥပမာအားဖြင့်, DR ရဲ့ကွဲပြားခြားနားသောဌာနများလျင်မြန်စွာ, လယ်ပြင်၌န်ထမ်းရန်ကလစ်များထွက်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, အစီအစဉ်ကိုထုတ်လုပ်ဌာနများနှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲတည်းဖြတ်နှင့်ပရိုဂရမ်းမင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်ဖို့အတွက်ထုတ်လုပ်သူများ, ဒါရိုက်တာများနှင့်အသစ်သောဘဏ်ဍာတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အခြားသူများကိုဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့နေ့စဉ်နားမှာပေါက်သောမြက်ပင်ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
"ဒိန်းမတ်အသံလွှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းဒိန်းမတ်၏လူတို့အဘို့ပရိုဂရမ်းမင်း၏အရေးပါသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေးစားအမျိုးသားရေးထုတ်လွှင့်အတူလက်တွဲထားရှိခြင်း ioGates ပလက်ဖောင်းရဲ့ခေတ်မီရိုးရှင်းအကြောင်းကို volumes ကိုပြောတတ်, "ioGates CEO ဖြစ်သူ Jesper Andersen ကပြောခဲ့သည်။ "ioGates အသုံးပြုရလွယ်ကူသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်စနစ် DR ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမသာ, ဒါပေမယ့်လည်းဒါကြောင့်တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ဝေဟင်မှအကြောင်းအရာများပေးပို့နိုင်ပါတယ်ကြောင်းသေချာစေရန် DR ရဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာအရှိန်အဟုန်မြှင့်ကူညီပေးသည်။ "
ioGates အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်ပါဗီဒီယိုကကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး iogates.com/qr/campaign/video2014/?utm_source=mypresswire&utm_medium=email&utm_campaign=DR.
ioGates ဖြန့်ဝေ, ကြည့်ရှု, converting, ခွဲဝေမှုအဘို့အ tools များကမ်းလှမ်းခြင်း, အဆင့်မြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသိပညာဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲပရော်ဖက်ရှင်နယ်မီဒီယာဖိုင်မော်ကွန်း။ ယင်း၏တည်ခင်းဧည်ဗီဒီယိုစီမံခန့်ခွဲမှုန်ဆောင်မှုအနည်းငယ်မျှသာအိုင်တီအရင်းအမြစ်များနှင့်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အသံလွှင့်, postproduction, ကြော်ငြာ, နှင့်စျေးကွက် Workflows အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဖို့မီဒီယာကုမ္ပဏီများသည်ကို enable ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီရဲ့အထင်ကရ ioGates cloud-based ကိုဗီဒီယိုစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်ကို formats နှင့်ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများအမျိုးမျိုးကိုင်တွယ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်သေးရိုးရှင်းတဲ့-to-အသုံးပြုမှုကိုက Web Interface ကိုကနေလုံလုံခြုံခြုံထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ioGates ကိုပင်ဟေဂင်, ဒိန်းမတ်အခြေစိုက်သည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.iogates.com.
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/ioGates/ioGates-Menu.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: ioGates Menu ကိုမျက်နှာပြင် Shot
အကြောင်းအရာ ဒိန်းမတ်အသံလွှင့်ကော်ပိုရေးရှင်း DR ioGates 2014-08-27
ယခင်: ဖုန်းများအတွက်သို့ပြောင်းပါ DM အင်ဂျင်နီယာများအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပေးစနစ်များထည့်သွင်းပေး DASDEC ပံ့ပိုးမှု
နောက်တစ်ခု: Nexidia နှင့် Telestream Nexidia QC စာတန်းထိုးအတည်ပြု Tool ကိုထဲသို့ Vantage လုပ်ငန်းအသွားအလာ Automation ပတ်ဝန်းကျင်၏ပေါင်းစည်းရေးကြေညာ